Kenya maku oor kacsan doontaa warbixintii Guddiga xaqiiqo raadinta? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Kenya maku oor kacsan doontaa warbixintii Guddiga xaqiiqo raadinta?
Dowladda Kenya ayaa waxaa maanta lagu wadaa inay qabato shir jaraa’id, oo markaasi ay kaga hadleyso xaaladda dalka, gaar ahaan midda Gobolka Gedo.
Kenya ayaa shirka jaraa’id uga hadli doonto khilaafka ka taagan Gobolka Gedo iyo sida uu u saameeyay xiriirkii labada dowladood, oo muddooyinkii ugu dambeysayba xumaa.
War ka soo baxay Xafiiska Afhayeenka Dowladda Kenya, Cyrus Oguna ayaa lagu sheegay in dowladdu ay 11-ka barqanimo isugu yeereyso Warbaahinta, si baa la yiri looga hadlo khilaafka ka taagan Gobolka Gedo iyo saamaynta uu ku yeeshay xiriirka u dhaxeeya Somaliya iyo Kenya.
Warka ayaa lagu sheegay, maadaama uu jiro xanuunka COVID-19 aan loo wada yeeri doonin Saxaafadda oo dhan, taasi bedelkeedana shirka jaraa’id ee dowladda qabaneyso looga yeeray Warbaahinta qaybteed. Warbaahinta ay soo xulatay Dowladda Kenya ayaana warka lagu xusay inay si toos ah u tebin doonto shirkaasi jaraa’id.
Shirka jaraa’id ee Kenya kaga hadleyso xaaladda Gobolka Gedo ayaa ku soo aadaya, xilli Isniintii dagaal dad badani ku dhinteen uu Degmada Beled Xaawo ku dhex maray Ciidamada Dowladda Somaliya iyo ciidamo ka amarqaata Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan). Dowladda Somaliya waxay dagaalkaas ku eedeysay Dowladda Kenya, isla-markaana ay soo hubeysay waxa ay ugu yeertay maleeshiyaad falaaga ah oo soo weeraray Beled Xaawo, inkastoo ay Kenya iska fogeysay.
Xukuumadda Muqdisho ayaa 29-kii bishii November u yeeratay Safiirkeedii u joogay Kenya, Amb. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), halka Safiirkii Kenya ee dalka u joogayna, Amb. Lucas Tumbo lagu wargaliyay in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto, ka dib markii ay Nairobi ku eedeysay inay fara-gelin qaawan ku hayso arrimaheeda gudaha, waxaana xigtay in Somaliya ay si buuxdo xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jarto Kenya.
Iyadoo markii horeba xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood uu xumaa ayaa dagaalkan ugu dambeeyay ee ka dhacay Beled Xaawo waxaa uu dabka ku sii shiday xiisaddii diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhex taagneyd.
Shirkan jaraa’id ayaa waxaa la fillayaa in Kenya ku oor kacsato warbixintii ka barri-yeeshay eedeymihii ay Somaliya u jeedisay, ee uu soo saaray Guddigii xaqiiqo raadinta ee bishii Decemer uu Urur Goboleedka IGAD u diray inay soo baaraan khilaafka labada dowladood iyo waxa ka jira xuduudda Degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandhera. Guddiga waxay warbixin ay soo saareen ku sheegeen, ka dib booqasho ay ku taggeen labada dal inaanay cadeymo sax ah u heyn in Kenya ay fara-gelisay arrimaha Somaliya, arrintaasoo ay Dowladda Somaliya ku gacan-seyrtay.
Previous articleBooliska oo gacanta ku dhigay nin kufsaday gabar 8 jira, ka dibna dilay
Next articleDowladda oo wafdi Wasiiro iyo Saraakiil ciidan u dirtay Doolow (SAWIRRO)